Blitz: Fitsapana fampisehoana sy fampidinana avy amin'ny rahona | Martech Zone
Blitz: Fitsapana fampisehoana sy fampidinana avy amin'ny rahona
Alatsinainy 1 Febroary 2016 Alatsinainy 1 Febroary 2016 Douglas Karr
Sarotra ny mitondra fampitahana amin'ny enta-mavesatra apetraka amin'ny mpizara tranonkala ka izao no mandeha. Alaivo an-tsaina hoe mpizara tranonkala ianao ary voatabia voatabia ireo mpitsidika anao. Raha manana sakafo iray na roa kapoaka ianao dia azonao atao tsara ny mitondra azy. Ataovy am-pelatanan-jatony vitsivitsy ny tananao, ary tsy misy mahazo mihinana izay ilana azy ireo ny sakafo. Ankehitriny, raha toa ka azonao atao ny mampihena ny haben'ny kalon'ny tsirairay, mizara azy tsara, ary mahazo fanampiana mitondra azy, dia mety ho afaka mitondra an-jatony ianao.
Miasa amin'ny fomba mitovy ihany ny mpizara tranonkala iray. Mpitsidika an-jatony vitsivitsy sy mpizara anao dia mety manana loharanom-pahalalana marobe aseho sy mitondra ny mpitsidika ny alehany. Fa manangona an'arivony na an'aliny maro ary mandahatra mijanona ny mpizara. Tsy hoe toa tonga any ny sasany amin'ireo mpitsidika ary misy kosa tsy afaka… najanona avokoa izy rehetra. Miseho miadana dia miadana ary mijanona tsy mamaky tanteraka mihitsy aza ireo pejinao. Izay ny antsika nijaly ilay tranonkala hatramin'ny herinandro vitsivitsy lasa izay.
Ny olana dia ny ankamaroan'ny orinasa dia matetika mamorona na mametraka tranokala amin'ny mpizara iray izay tsy manana enta-mavesatra aminy. Avy eo dia napetrany tamin'ny famokarana izany, tonga ny mpitsidika, ary nidina haingana izy io.
Mba hiomanana amin'izany, serivisy fanandramana fampisehoana sy enta-mavesatra afaka manampy. Blitz dia serivisy fanatanterahana rahona sy serivisy fitiliana entana, tsy misy rindrambaiko apetraka. Ny serivisy dia manohana mpampiasa virtoaly hatramin'ny 200,000 avy amin'ny toerana samy hafa eran'izao tontolo izao (hatramin'ny 8 isam-paritra) handefasana fitsapana ny fampiharana na tranokalanao. Io dia ahafahan'ny mpampiasa mampitaha ireo lozisialy, loharanom-pitaovana ary mpanome tolotra samihafa. Farany, mamela anao hahita famerenana amin'ny laoniny alohan'ny fitsidihan'ny mpitsidika anao izany.
Blitz dia noforonina mba hanampiana ireo mpikirakira fampiharana sy tranokala hitantana sy hizaha toetra ny zava-bita nandritra ny androm-piainan'ny fampandrosoana. Amin'ny alàlan'ny fampandrosoana, fampisehoana, famokarana ary asa, zava-dehibe ny miantoka ny fahafenoan'ny fampiharana anao amin'ny avo indrindra amin'ny fahafaham-pon'ny mpampiasa.
Blitz manolotra fiasa tsara ho an'ny fandaharam-pandraisana antoka kalitao mitohy:
Fifanakalozana sarotra - Na te-hitsapa pejin-tranonkala ianao na fifanakalozana sarotra, Blitz dia manamora ny fahafahanao mamaritra ny isan'ny mpampiasa azonao tohanana.
Fanehoan-kevitra amin'ny antsipiriany - Makà antontanisa sy valiny amin'ny antsipiriany amin'ny fotoana tena izy, ary amin'ny teny anglisy tsotra. Ny tatitra izay afaka manampy anao amin'ny debug ny fotodrafitrasao, mamantatra ny sotasota ao amin'ny rindrambaiko ary mamaritra fotsiny raha mila manampy mpizara hafa ianao.
Plugins - Miaraka amin'ny fanitarana azonay ho an'ny Chrome na add-on ho an'ny Firefox, mivezivezy fotsiny amin'ny tranokala ary manao fitsapana fampisehoana. Blitz dia mikarakara ny cookies, ny fanamarinana ary ireo pitsiny hafa rehetra.
automatique - Miaraka amin'ny Ruby GEM sy fampidirana feno miaraka amin'ireo mpizara mitohy mitohy toy ny mpizara Atlantika Bambu CI, ny fitsapana ny fahombiazan'ny mandeha ho azy dia azo antoka fa tsy misy fanerena kaody mety hiteraka traikefa ratsy ho an'ny mpampiasa anao.
Fanaraha-maso amin'ny fizaram-potoana miaraka amin'ny enta-mavesatra:
Fanaraha-maso ny fotoana famaliana amin'ny valiny:
Manana fampandrosoana i Blitz API mpanjifa izay mihazakazaka ao Java, Maven, Node.js, Python, Perl, ary PHP.
Tags: BlitzrahonaJavafanandramana enta-mavesatraMavenNode.jsfanandramana fampisehoanaPerlFiPython
Namindra mpampiantrano izahay… Mety ho tianao koa izany
Fomba 7 hanatsarana ny fantsom-pivoaran'ny fivarotana an-tserasera